‘वामदेवपन्थी उल्का’ हरायो, वामपन्थी बदनियत विद्यमान - ‘वामदेवपन्थी उल्का’ हरायो, वामपन्थी बदनियत विद्यमान
‘वामदेवपन्थी उल्का’ हरायो, वामपन्थी बदनियत विद्यमान
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ आश्विन, 11:28:19 AM
जनमतको अनादर गर्ने क्रुर खेलबाडले ने.क.पा.भित्र स्थायित्व पाएको प्रमाणित
सत्तारुढ ने.क.पा.ले वामपन्थी पहिचानमात्र होइन ‘वामदेवपन्थी’ नियत पनि बोकेको छर्लङ्ग भएको छ । ने.क.पा.मा वामदेव गौतम व्यक्तिमात्र नभएर प्रवृत्ति वा चरित्रको नामका रुपमा पनि प्रस्तुत भएको छ, वामदेव उपचुनाब लड्ने ‘हाललाई स्थगित’ प्रकरण ।
आफ्नै पार्टीको निर्वाचित सांसदलाई जनतासामु नाङ्गेझार पार्दै जनमतको अपमान गर्ने पञ्चतन्त्रको बाँदर शैलीलाई ‘वामदेवपन्थी चरित्र’ भन्दा अर्को उपयुक्त शब्दावली हामीले पाएनौँ । यद्यपि आजको ने.क.पा.ले यसअघि दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका माधवकुमार नेपाललाई यसैगरी आफ्नै सभासद सुशीलचन्द्र अमात्यलाई हटाएर संविधानसभामा पु¥याएर प्रधानमन्त्री बनाएको लोकतन्त्रघाती खेल जनताले बिर्सिहालेका छैनन् । त्यसरी प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा लागेका अरु कोही होइनन्, आज ने.क.पा.को सहअध्यक्ष हुनपुगेका पूर्वमाओवादी पुष्पकमल दाहाल ऊर्फ प्रचण्ड हुन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीका बिरुद्ध अहिले भित्रभित्रै प्रचण्ड उसैगरी लागेका छन् ।
निर्णय त्याग्दैमा नियत त्यागियो भन्ने आधार हुँदैन । नियत त्यागिएको भए चुनाबमा पराजित माधव नेपाल चोरबाटो गरी संविधानसभामा पुग्दा जनताले आजसम्म गरेको निन्दा र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै वामदेव गौतमको हकमा दोहोरिने छुट हुने थिएन । तर ने.क.पा.भित्र यस्ता लज्जास्पद निर्णय निर्लज्ज तरिकाले दोहोरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको मजाक उडाउने सामन्तवादी राजनीति चलिरहेकै छ ।
ने.क.पा.का नेताहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारका कारणले होइन, नागरिक समाजको कडा विरोध र आलोचनाले गर्दा ने.क.पा नै छि : छि : दूरदूरको पात्र हुन थालेपछि बाध्य भएर काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट वामदेव गौतम उम्मेद्वार हुने निर्णय ‘हाललाई स्थगित’ गर्न पुगेको हो । निर्णय त्याग्दैमा नियत त्यागियो भन्ने आधार हुँदैन । नियत त्यागिएको भए चुनाबमा पराजित माधव नेपाल चोरबाटो गरी संविधानसभामा पुग्दा जनताले आजसम्म गरेको निन्दा र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै वामदेव गौतमको हकमा दोहोरिने छुट हुने थिएन । तर ने.क.पा.भित्र यस्ता लज्जास्पद निर्णय निर्लज्ज तरिकाले दोहोरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको मजाक उडाउने सामन्तवादी राजनीति चलिरहेकै छ ।
तीनपल्ट उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका वामदेवलाई यति निम्नकोटीको मरिहत्ते गरेर संसदमा ल्याउने सामन्तवादी मनोवृत्तिको अभ्यास आकस्मिक रुपमा भएको होइन, ने.क.पा. भित्र धेरै अगाडिदेखि चल्दैआएको हो । डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढाले वामदेवलाई सांसद बनाउन निर्वाचन क्षेत्र (डोल्पा) खाली गरिदिने र उनलाई चुनाव जिताएर ल्याउने बाचाका लागि वामदेवको भागबण्डामा परेको पर्यटन राज्यमन्त्री पद बुढाले पाएको धुमधाम प्रचार भएकै हो, जसबाट मन्त्री हुन नेकपाभित्र यस्ता सर्त र भागबण्डा पनि चल्दछन् भन्ने जगजाहेर भएको थियो । सांसद बुढाले जब जिब्रो फेरेर कुरा गर्न थाले, त्यसपछि वामदेव अन्य निर्वाचन क्षेत्रतिर विकल्पको दृष्टि लगाउन थाले । यस सिलसिलामा नेकपाका अन्य सांसदहरू बाँके–३ का नन्दलाल रोकाय, दैलेख–१ का रवीन्द्र शर्मा र रुकुम पूर्वकी कमला रोकालाई बलीको बोको बनाउने असफल धृष्टता भएको हो ।
तर कुनै सांसदले पनि आफु निर्वाचित भएको क्षेत्र वामदेवका लागि छोड्न तयार भएनन् । अलिकति सुझबुझ भएको राजनीतिक प्राणीले सजिलै बुझ्न सक्ने यथार्थ सामुन्ने थियो– एक वर्ष नपुग्दै आफुलाई भोट दिएर जिताएका जनताको मतादेशलाई कुठाराघात गर्दा जनताले त्यसलाई पचाउन त सक्दैनन् नै राजनीतिक क्यारियर नै धरापमा पुग्दछ
त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा ने.क.पा. का अध्यक्ष के.पी. ओली र वामदेव गौतमबीच वामदेवलाई सुरक्षित र सुनिश्चित क्षेत्रबाट ‘जिताएर सांसद बनाउने’ कुरामा सल्लाह र सहमति भएको पुष्टि पनि भयो । तर कुनै सांसदले पनि आफु निर्वाचित भएको क्षेत्र वामदेवका लागि छोड्न तयार भएनन् । अलिकति सुझबुझ भएको राजनीतिक प्राणीले सजिलै बुझ्न सक्ने यथार्थ सामुन्ने थियो– एक वर्ष नपुग्दै आफुलाई भोट दिएर जिताएका जनताको मतादेशलाई कुठाराघात गर्दा जनताले त्यसलाई पचाउन त सक्दैनन् नै राजनीतिक क्यारियर नै धरापमा पुग्दछ ।
तर काठामाडौँ ७ बाट दुईपटक निर्वाचित भइसकेका ने.क.पा.का सांसद रामवीर मानन्धरले आफू निर्वाचित क्षेत्रबाट वामदेवका लागि राजिनामा दिँदा मतदाताको उपरोक्त मनोविज्ञान बुझ्न सकेको देखिएन । उनलाई यतिबेला २५ करोड रुपैयाँ खाएर चुनाब क्षेत्र खाली गर्न तयार भएकोदेखि जनताको भरोसा गुमाएका अनेकौँ वात लागेको छ । ‘मैले केही गर्न सकिन, वामदेवजी आएर विकास गर्नुहुन्छ’ भनेर उनले आफ्नै नालायकी जनताका अगाडि उदाङ्ग पारेका छन् । अहिलेलाई चुनाव क्षेत्र छोड्नु नपरे पनि रामवीर मानन्धरप्रति जनताको मोहभङ्ग हुनथालेको छ । लोक मनोविज्ञान ने.क.पा.बाट भड्किँदै गएको अवस्था छ । त्यसैले त्यस क्षेत्रमा उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई पूर्णविराम लगाएका छन् ।
माथि नै भनियो, वामदेव नेपाली राजनीतिमा एउटा व्यक्ति वा कम्युनिस्ट नेतामात्र नभएर प्रवृत्ति वा चरित्रको नाम हो । उनलाई विगतमा केमात्र वात लागेन ! वामदेवसहित सी.पी. मैनालीले एमाले पार्टीलाई शीरदेखि तीरसम्म फुटाएर दुईफ्याक बनाई ‘ने.क.पा. (माले) गठन गरेकै हुन् । जसलाई एमाले पक्षकाले फुटेको पार्टीको नाम नलिएर वामदेव र सीपीलाई जनाउने ‘बासी गुट’ भन्ने गर्थे । ‘वासी गुट’ले एमालेको मूलघरमा रहेका नेताहरूलाई ‘चरम राष्ट्रघाती’ भनी अहोरात्र आरोप लगाएकै हो । तत्कालीन एमाले पार्टीको विशेष आयोजनामा २०५४ साल चैत्र २६ गते जनआन्दोलन दिवस मनाउन काठमाडौँको खुलामञ्चमा विशाल आमसभा गरी ‘नेपालका ३ सय महाभ्रष्टहरूको सूची’ पढेर सुनाइयो, जुन सूचीको ‘एक नम्बर भ्रष्टाचारी’मा वामदेवकै नाम थियो ।
भ्रष्टाचारीको नामावली वाचन गर्ने एमालेकै चल्तापूर्जा नेता प्रदिप नेपाल थिए । त्यसअघि एमालेको स्थायी समितिको बैठकमा ईश्वर पोखरेलले वामदेवमाथि २१ वटा संगीन आरोप लगाउँदै, पार्टी चलाउदा जुवाडे शैली अपनाएको, सुरा–सुन्दरीको राजनीति गरेको, सून तस्करीलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आपराधिक क्रियाकलापको सूची पेश गरेका थिए । हालै प्रकाशित पूर्व आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको संस्मरण (पुस्तक) मा आईजीपी बनाउन २० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका छन् ।
लोकतन्त्रलाई विकृत र बदनाम बनाएर खेलिने फोहोरी राजनीतिलाई हामी सदैव निन्दा गर्छौँ, जताबाट त्यस्तो भएको किन नहोस् ! वामदेव त ने.क.पा.को एउटा व्यक्ति मात्र हुन् । तर वामदेवलाई बोक्ने, वामदेवलाई पालनपोषण गरेर यहाँसम्म पु¥याउने दोषीका रुपमा पूर्व एमाले र हालको ने.क.पा. दोषमुक्त हुन सक्दैनन् । आफ्नो अभिमान बढाउने तर राष्ट्रको स्वाभिमान गिराउने जुनसुकै व्यक्ति वा पार्टी भए पनि त्यस्तो चरित्र हाम्रो विरोधले प्रहार गर्ने कुपात्र हुन् ।
२०७५, २८ आश्विन, 11:28:19 AM
लगानी सम्मेलन र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको महापहाड !
मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदै, को-को हुन् संभावित नयाँ मन्त्री ?